संस्मरण : अरब, आर्यघाट र अरथी - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : सपनाका बिम्बहरु
कविता : लाशहरु उठ →
म महानिर्वाणको सागर छेऊ उभिएको छु । देख्छु, ब्रम्हनाल नजिकैको मलामी घरमा आधा दर्जन मान्छेहरूको रुवाबासी । मन एकतमासको हुन्छ र सम्झन्छु भजनको एक अंश, ‘‘दुई दिनको पाहुना हौँ यो संसारको नाट्यशालामा…’’
तर केही साथीहरू लास निःशुल्क जलाउने पहलमा लागे । अनि केही सञ्चार माध्यमलाई खबर गर्दै थिए– गरिबको लासले सहजै जल्न पाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन ।
‘यही हो सपनाको दाहसंस्कार ।’ म कसैलाई केही समय अगाडि प्रकाशित आफ्नै कथासङग्रहको प्रसङ्ग सुनाउँछु– ‘कथा कुनै कल्पना होइन, समयको अनन्त सिर्कनाहरूले सुम्ल्याएका घाउहरूको व्यथा हो ।’
‘तरुण सपनाको लर्को बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । रित्तिएका घर र बस्तीहरूमा कति सपनाहरू जिउँदा फर्किएका छन् त्यसको लेखाजोखा छैन । युवा जोसको अनन्त भेल र पसिनाका अजस्र नदीहरू विमानस्थल बाहिर पठाएर देश गर्व गरिरहेछ– विप्रेशण (रेमिट्यान्स) भित्र्याउन सकेकोमा, तर….।’ म घोत्लिन्छु ।
आइपुग्छन् एबीसी न्युजका सञ्चारकर्मी र केहीबेरपछि हिमालय टीभीका पनि । अनि क्यामरामा कैद हुन थाल्छन्– मृत्युको संवेदना, बाकसको लास, बालकका टिठलाग्दा अनुहारहरू, रुँदा रुँदा आँशु सुकिसकेका निरीह र निमुखा परिवारको पीडा र मागेर लास जलाउनु पर्ने नियतिको करुण दृश्य ।
अघिका तिनै अधवैशेले दोभाषेको काम गर्न थाले । उनी केही वर्ष सर्लाहीतिर नै काम गरेका रहेछन् । ‘तपाईं आफन्त हो ?’ सञ्चारकर्मीको सोधाइमा उनले जवाफ दिए, ‘होइन, सहयोग मात्र गरेका यिनीहरूको पीडा देखेरे ।’
ती दुई नाबालकको कपडा खोलियो र कोरा बस्त्र लगाइयो । ‘यो तिमीले नै गर्नुपर्छ बाबु ! ल यसो गर ।’
आपूmलाई मृतकको आफन्त बताउने अधबैसेले भोजपुरी भाषामा सम्झाउँदै थिए ।
चिताको आगोसँगै रुवाइका विलापहरू चर्किए । अब आमाको रुवाइ सुनेर सानो बालक पनि डाँको छाडेर रुँदै थियो ।
अब मान्छेहरू मौन थिए र टिठ्याउँदै थिए तिनै टुहुराहरूप्रति । केही शब्दहरूमा आक्रोश थियो घाट व्यावस्थापक र सरकारी वेवास्ताप्रति । यस्तो लाग्छ सबमा मौन आक्रोश थियो सरकारको गैरविम्मेबवारीपन प्रति । खाडीको मरुभूमिमा सपना रोपिरहेका लाखौँलाख कामदारको विप्रेशणले देशको अर्थतन्त्र सिञ्चित भइरहेको छ । अनि त्यही सपनाको यो विभत्स स्वरुपको नियतिप्रति सरकार किन जिम्मेवारबोध गर्दैन ? हरेक श्रमिकबाट श्रम स्वीकृतिका लागि शुल्क लिने सरकार तिनै श्रमिकको मृत्यमा किन नैतिक उपस्थिति देखाउँदैन ?
आर्यघाट साझा हो, सबैले जल्न पाउँछन् त्यहाँ तर त्यहाँ जल्न पनि दाम नै चाहिँदो रहेछ । जीवनका सपनाहरू फुलाउन सपनाका पखेटा हालेर अरब पुगेका कैयौँ युवाहरूका आकांक्षा केही हदसम्म त पूरा भएको होला । त्यो सपनासँगै देशको अर्थतन्त्र ठमठम हिड्न सकेको पनि छ । तर कतिको सपनाहरू बाक्साभित्र बन्द भएर आर्यघाटसम्म आइपुगेका छन्, त्यसको लेखा सरकारले कहिले राख्छ ? देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउने तिनै श्रमिकहरूप्रति जिम्मेवारबोध गर्दै कहिले सजग हुन्छ र भवितव्यको शिकार भएकाहरूलाई विना व्यवधान दाहसंस्कारको व्यवस्था कहिलेबाट गर्छ ?
‘‘सायद भरे नै समाचारमा आउला, ‘गरिबीकै कारण लासले पनि जल्न पाएन आर्यघाटमा ।’ मान्छेहरू टुहुराको टिठलाग्दो निर्दोष अनुहार हेरेर सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्लान् । अझ सके सहयोगी हातहरू पीडितको घरसम्म पुग्लान् । के त्यसले समस्याको स्थायि समाधान हुन्छ ? आज त केही सक्रिय र सजग मान्छेहरूका कारण त्यो परिवारले सहयोग पायो तर के फेरि अर्को बाक्सामा बन्द भएर आएको अरबको सपनाले त्यही सहयोग पाउन सम्भव होला ?’’ म मन मनै सोच्छु ।
मलाई लाग्यो, ‘कहिल्यै गाउँ छाडेर बाहिर ननिस्केका मृतकका परिवारलाई विमा रकमको दावी र राहतका लागी गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको के मेसो ? यस्ता निमुखा पीडित परिवारको घरसम्म राहत सजिलै पुृ¥याउने व्यावस्था राज्यले गर्नुपर्ने होइन ? सहज ढङ्गले पीडितको घरसम्म राहत पुग्ने व्यवस्था राज्यले कहिले गर्छ ?’
‘बाकसमा बन्द अरबका सपनाहरू कहिलेसम्म राज्यको उपहास गर्र्दै आर्यघाटमा सरकारको उपस्थिति र जिम्मेवारीबोधको माग गर्दै घाटमा नै लडिरहन्छन् ? के हो राज्यको दायित्व ?’ मेरो मनमा निकै वेर यही प्रश्न रुमलिइ रहन्छ ।
(यो संस्मरण कतारबाट आएको एउटा लास घाट शुल्क तिर्न नसकेको अपराधमा आर्यघाटमा निकै समय नजलाइएको घटनासँग सम्बन्धित छ ।–लेखक)
–केशरी अम्गाईं, गोरखा ।
This entry was posted in संस्मरण and tagged Keshari Amgai. Bookmark the permalink.